DEG DEG+DAAWO: Aaden Barre Ducaale oo KIsmaayo ka jeediyey warkii ugu adkaa.
KISMAAYO(P-TIMES) – Gudoomiyaha Aqbalida baarlamaanka dalka Kenya Aaden Barre Ducaale oo ka hadlayay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in aysan Kenya waxba dan gaar ah kalahayn arrimaha ku wajahan gudaha Soomaaliya, gaar ahaana Jubbaland.
Gudoomiyaha baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in looga baahan yahay dhinacyada siyaasadda oo dhan, in ay midnimo la yimaadeen, wuxuuna cadeeyey in ay dadaal badan galinayaan sidii labada dal xariirkooda sare loogu qaadi lahaa.
Madaxweynaha Kenya ayuu sheegay in uu ku faraxsan yahay doorashada Axmed Madoobe, wuxuuna sheegay in ay Kenya u aragto saaxiib dhaw Jubbaland, maadaama ay joogaan Boqolaal kamid ah ciidamada dalka Kenya, kuwaas oo qorshahoodu yahay sugida Ammaanka.
Hoggaamiyaasha Soomaalida oo dhan ayuu ugu yeeray in ay muujiyaan biseyl siyaasadeed, ayna waajib tahay in wadajir iyo midnimo lagu gaaro arrimaha taagan.
Qolada ku taagan Deni waa beeshiisa hoose oo an raali ka ahayn in uu qabto jagada uu hayo.Waayo beeshu waxay jagadaas la rabtay nin kale oo ayaga ah.Saas weeye sababta loo leeyahay Deni waxba ma uu qaban iyo waxbuu qaribay.Wax uu qaribay ma aynaan arag wali.Waxa soo aadana Ilaahay (swt) baa ogsoon.Beesha dagan magaalada Qardho waa in ay joogisaa mashaakilada ay hurinayaan Odayaasha waaweeyn oo waa in ay isla yaabaan.Waxba yaan lagu mar-marsoon reer bari.Waxa shidada wadaa waa jilib ka mida haybta Dani oo diidan Dani.Dani reer puntlaan oo dhan buu madaxeweyne u yahay.Haddii laga gardaran yahayna way u soo hiilinayaan Dani shacabka kalee reer puntlaan.War looma baahna shido iyo maamulkoo la mashquuliyo.Reer Gaalkacyo waxay leeyahiin war ninkaas wuu ku cusub yahay masuuliyada uu hayo ee bal haloo kaadiyo intuu wax kala fahmayo.Haddii ay wax ka qaldameen waxuu u baahan yahay in la saxo ee ma aha in lagu kiciyo mashaakilo iyo buuq an sabab lahayn.Shaki kuma jiro in uu ka maamul fiican yahay labo ka mida afartiin nin ee uga horeeysey jagadaas.Reer Gaalkacyo waxay leeyahiin war reer Qardhoow ka daaya Dani buuqa iyo beenta ad ka faafinaysaan maamulkiisa.